Popular abadlali Russian namuhla
Modern yasekhaya show ibhizinisi - it is a ekhethekile futhi bahlukaniswa lonke impucuko ngandlela-thile, izwe ahlala kulo nezinye abantu abambalwa ngezinkathazo zawo; ngebhizinisi cranky. abadlali Russian - kuyinto ezimweni eziningi umuntu ngisho ngaphandle igama global, kodwa ngempela abaziwa leli zwe futhi esimweni saso bomdabu ngaphakathi, futhi kungaba, futhi ngaphakathi emazweni angomakhelwane kakhulu. Lesi sihloko uzokutshela mayelana ethandwa futhi kwafunwa kule minyaka eyishumi eyedlule abaculi Russian.
Asiqale, nabadlali Russian uzobe kuchazwe. Uhlu izikhathi ukuvula esigabeni kazwelonke. Leonid agutin, Nikolay Baskov, Oleg Gazmanov, Valery Leontiev, uVladimir ng, u-Alexander Rosenbaum, Soso Pavliashvili, umculi Inkazimulo, Lolita, iqembu "Izithandani Jwayelekile" "Mumiy Troll" ekuqaleni zero zazinzima ethandwa futhi idume amabutho abalandeli abaqotho, kodwa lapho kuqala eyishumi kwekhulu lesibili udumo lwabo liphelile kancane. Namuhla, laba baculi kungabonwa kuphela amakhonsathi bendabuko kakhulu futhi kusihlwa zomculo. Yini engase ishiwo Filippe Kirkorove, Valery Meladze, UGrigory Leps, abahlabeleli UNatalie Anita Tsoi, Iqembu "Izilwane", "ubende". Lezi abaculi yafuna futhi abathandwa izilaleli ngisho nanamuhla. amakhonsathi bayo busuke busakhula kuze ukuqoqa izigidi abalandeli. Futhi konke lokhu naphezu kweqiniso lokuthi nabo banelungelo bazibiza "asebemnkantsh 'ubomvu pop."
abadlali Russian - liphinde isizukulwane esisha. ithengiswe udumo wabo manje isiqongo lamadiski zabo ngokushesha kunabanye, ekhonsathini yabo izinkambo ihlelelwe iminyaka eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa. Young Russian pop singers baningi kakhulu. uhlu yabo lwamagama abangamakhulu amaningana neziteketiso, futhi elalidume kunawo wonke - Dima Bilan, Sergey Lazarev, rapper Timati, protégé yakhe - egor Krid, Andrey Grizli, u-Aleksey Vorobev, Dan Balan, Dominik Joker, irakli, Max Korzh, Denis Maidan, Tamerlane, Vyacheslav Basyul, Ani Lorak, Ivan Dorn niusha Pelagia, Julia Savicheva, Anna Sedakov, Vera Brezhneva, Tachi, Elena Temnikova, uPolina gagarina, Elvira T, Maxim, Loy, Svetlana Loboda Stas Kostyushkin, Noise MC, Julian Karaulova, iqembu " NeAngeli ", " I-Pizza "," Isiliva ", M-Band," 23:45 "," banderos "," 30,02 ", Quest Pistols ," Degrees "quartet" Mnu royi "," China ", laba abathathu" via gra "kanye nabanye abaningi.
abadlali Russian namuhla - ke nakho kuvele kamabonakude amaningi athandwayo. Le phrojekthi ne izilinganiso eliphakeme e-TV yasekhaya - ukukhombisa "The Voice". Le sayithi ukhiphe singers amahle ezifana Nodar Reviya Gela Gural, u-Alain Toymintseva Elina Chaga, Nargiz Zakirov nabanye abaningi.
Russian show ibhizinisi, linezela esizukulwaneni esisha. Ummeleli elivelele laleli qembu ikakhulukazi esigabeni kazwelonke kungenziwa ngokuthi Viktor Petrik. Intombazane - winner lomkhosi edume umhlaba "Wave entsha". Lokhu nakanjani esikhundleni njengabakufanelekele ukuhlaziswa izakhamizi endala show ibhizinisi Russian. Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho abaculi Russian kakhulu ziphoqa okwamanje.
Simon Le Bon: Biography nemisebenzi
ULidiya Clement: Biography nemisebenzi
Luthiers Antonio Stradivari, Nicolo Amati, Dzhuzeppe Gvarneri nabanye
Olga Zarubin: Biography of actress ezidumile nenkathi yamaSoviet
Cooling teethers - yimuphi ongcono futhi kanjani ukukhetha? Ngasiphi yobudala ukuthenga teething zezingane?
Ukudla turkey cutlets - ongakhetha ukupheka. Turkey cutlets: zokupheka kuhhavini futhi umbhangqwana
Izindlela eziphumelelayo izintwala
Ibhishi iholide ngo-August. Spain, Italy, Greece: iholidi beach ngo-August
"Amor Amor", amakha: ezintathu izithombe omunye ukunambitheka
Uyini Umqeqeshi ngoba hyperextension?